Midab saafi ah oo ah qaabka Yurub ee Baaskinka Birta ah
Istaraatiijka iPad -ka ee la hagaajin karo, kuwa haysta Tablet。
• macluumaadka alaabta
• Shayga No .: HL-1336
• Qalab: Bir bir ah
• qaab: cad
• Qaabka: Qaabka Yurub
• Qaab: wareegsan
• Dadka khuseeya: dadweynaha
• Haddii ay tahay buug -gacmeed: Maya
• Sharaxaad: Barkad gadaal oo aad u-weyn oo leh derbi dibadda ah oo barafoobay. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhaqo khudaarta, lagu dhaqo bariiska iyo miraha, loo sameeyo baasto, lagu garaaco ukunta, dheriyada maraqa, iwm. Qalab buuxa oo ah matryoshka naqshadeynta kaydinta fudud.
• Sheyga Maya .: HL-1336
• Style: Qaabka Yurub
• Goobta Asalka: Dhulka Shiinaha
• Kala soocidda midabka: baasiin adag oo dhumucaysan 18cm (keli ah) Barkad adag oo dhumucaysan 20cm (keli ah) Barkad adag oo dhumucaysan 22cm (keli ah) Barkad adag oo dhumucaysan 24cm (keli ah) (keli) Barkad adag oo dhumuc weyn 32cm (keli ah) Barkad adag oo qaro weyn 34cm (keli ah) Barkad adag oo dhumuc weyn 36cm (keli ah) Barkad gadaal ka sii dheer 18cm (keli ah) Barkad kale oo aad u qaro weyn 20cm (Keligeed) Barkad kale oo qaro weyn 22cm (keli) berkedda dambe 24cm (keli ah) Barkad weyn oo aad u weyn 26cm (keli ah) Barkad dambe oo aad u sii dheer 28cm (keli ah) Barkad weyn oo aad u qaro weyn 30cm (keli ah) Barkad gadaal oo aad u sii dheer 32mm (Kaliya) Barkad Dheeraad ah oo Dhumuc Weyn 34cm (Keli) Dhulka Dhiman ee Dhumucda Leh 36cm (Keligiis) Barkad Dheeraad ah oo Dheeraad ah Laba Gogo '28cm Dheeraad Dheeraad ah oo Dheeraad ah Laba Gogle m
• Hadday tahay buug -gacmeed: Maya
• Sharaxaad: Barkad gadaal oo qaro weyn leh oo leh derbi dibedda ah oo barafoobay. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhaqo khudaarta, lagu dhaqo bariiska iyo miraha, loo sameeyo baasto, lagu garaaco ukunta, dheriyada maraqa, iwm. Qalab buuxa oo ah matryoshka naqshadeynta kaydinta fudud.
Adkaysan oo la xoojiyey, sidii dhagax oo kale oo adag
Waxay qaadataa tikniyoolajiyadda wax-hal-hal-abuurka waxaana lagu been abuurtaa habab badan.
Barkaduhu way is -dul -dhacaan oo meel ma qaataan
Awood aad u weyn, laakiin ma qaadanayso boos, is -dul -saaran, jikada waa mid nasasho leh oo kooban marka laga bilaabo.
Mr.huolang waa silsilad dukaan waaxeed leh 600+ dukaan. Waayo -aragnimo sannado ah ee warshadaha silsiladda sahayda, sahayda jikada ee kala duwan, qalabka guriga, alaabta carruurtu ku ciyaarto, sahayda xafiiska iyo alaabo kale.
Lahaanshaha bakhaarka waaxda, sahayda warshadda, ku soo dhowow inaad la tashato oo aad fahanto siyaasadda franchise -ka iyo shuruudaha hannaanka!
Hore: Stainless Steel Portable Baaxad weyn oo sanduuq Qado badan leh
Xiga: Meesha dharka lagu xidho ee miiska aan biyuhu ahayn
Mr. huolang Crystal Glass Ashtray
Mr. huolang Ceramic Vase Home Qurxinta
Shiinaha Yiwu Mr. Huolang Saddex Geesood Afar-lakab Pl ...
Meesha dharka lagu xidho ee miiska aan biyuhu ahayn